सजिलो भयो ड्राइभर खोज्न, २४ सै घण्टा फोन गरी बोलाउन सकिने!
रबिन श्रेष्ठले १३ वर्षसम्म ड्राइभरको रूपमा काम गरे। व्यक्तिगत गाडी देखि संस्थाका थुप्रै गाडीहरू चलाए तर मालिकहरू फेरिए पनि उनीहरूले ड्राइभर प्रति गर्ने दुर्व्यवहार कहिल्यै फेरिएन। उनलाई यो कुराले नरमाइलो महसुस गराउँथ्यो। यसबाट उनमा असन्तुष्टि बढ्दै जान थाल्यो। तर उनी के नै पो गर्न सक्थे र, चुपचाप बसिरहे, सहिरहे, अरूकै दबाबमा काम गरिरहे। केही समयपछि गरिरहेको जागिरबाट बिदा लिने दिन पनि आयो। उनलाई आफूले भोगेका समस्या अरूले पनि भोग्न नपरोस् भन्ने लाग्थ्यो। त्यसैले उनीजस्ता अन्य कयौँ ड्राइभरहरूले पनि यस्तो दुरावस्था भोग्नु नपरोस् भन्ने सोचका साथ आफ्ना साथी विकास थापासँग मिलेर ड्राइभर सर्भिस फर केयर प्रा.लि को स्थापना गरे।
यो कथा पनि यिनै दुई युवाको जोस र जाँगरले सृजना गरेको नौलो व्यवसायको कथा हो।
रुपन्देहीमा जन्मेका रबिन श्रेष्ठ ८ कक्षाको पढाइ सकेर काठमाडौँ आए। आमा, दाजु र दिदी काठमाडौँ मै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उनको यतै पढ्ने निर्णय भयो। १२ सम्मको पढाइ सके। १२ सकेपछिको लामो छुट्टिमा उनलाई यत्तिकै बस्न मन भएन। ड्राइभिङको तालिम लिए। तालिम लिएपछि अब के गर्ने त? उनलाई जागिर खाने जाँगर चल्न थाल्यो। जागिर खोज्न थाले। खोज्दै जाने क्रममा एउटा INGO मा ड्राइभरको पोस्ट खाली रहेछ। आवेदन दिए। अनि उनको पहिलो जागिर सुरु भयो।
संस्थाका माथिल्लो पदमा बसेका कर्मचारीले भनेको मान्नुपर्ने, सधैँ दबाब हुन्थ्यो। त्यहि पनि उनले सक्दो सहे, मन थामे तर काम छाडेनन्। काम गर्दै जाँदा उनको त्यहीँ संस्थाका एकक्जाना विकास थापा नामक कर्मचारीसँग राम्रो चिनजान भयो। विकास त्यस संस्थामा फाइनाइन्स एसिस्टेन्ट थिए। दुवैमा मित्रता बढ्दै गयो। छोटो समयमा नै निकै नजिक भए उनीहरू। तर उनीहरूले संस्थासँग गरेका कन्ट्रयाक्टको अवधि सकिने समय नजिकिँदै थियो। यसो हुँदा उनीहरू छुट्टिनु पर्ने हुन्थ्यो। सन्जोग भनौँ वा भाग्य दुवैको कन्ट्रयाक्ट एकै समयमा सकियो।
जागिर नभएपछि दुवैलाई अब के गरूँ, कसो गरूँ हुन थाल्यो। दुवैले ‘अब के गर्ने?’ भनी सरसल्लाह गरे। त्यसबाट सँगै मिलेर व्यवसाय सुरु गर्ने निर्णयमा पनि पुगे। तर कस्तो व्यवसाय गर्ने त? प्रश्न उठीरहेकै थियो। आफ्नो १३ वर्ष लामो ड्राइभिङ्गको अनुभवबाट रबिनले त्यस क्षेत्रको समस्याहरू राम्रोसँग बुझेका थिए। उनलाई यसको समाधान गर्ने किसिमको व्यवसाय सुरु गर्ने मन थियो। अनि विकासलाई आफ्नो मनको कुरा राखे। दुवैजनाको सल्लाहमा ड्राइभर सप्लाई गर्ने कम्पनी खोल्ने निर्णय भयो। तर कसरी सुरु गर्ने? ड्राइभर कसरी खोज्ने ? कसरी पठाउने? भन्ने कुरामा उनीहरू अलमल्ल परे। यसका लागि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो र उनीहरू त्यतैतिर लागे।
काठमाडौँका घरघरमा पुगेर व्यक्तिपिच्छे प्रतिक्रिया सङ्कलन गरे। घरका मुख्य व्यक्तिहरूसँग कुरा गरे। गाडी मालिकलाई ड्राइभरका तर्फबाट भइरहेको समस्या बुझे। उनीहरू कस्ता ड्राइभर चाहन्छन् भन्ने कुरा पनि खोजे। धेरै व्यक्तिहरूबाट जानकारी आउँदा सजिलो हुन्छ भनी विभिन्न स्कुल तथा कलेजहरू पनि धाए। सङ्घसंस्थाहरूमा पनि पुगे। उनीहरूले गर्न खोजेको कामको बारेमा सुनाउँदा राम्रा नराम्रा दुवै किसिमका प्रतिक्रियाहरू आउन थाले। भन्न त केही व्यक्तिले ड्राइभर सप्लाई गर्ने काम नै राम्रो होइन पनि भने। तर धेरैजस्तो प्रतिक्रिया सकारात्मक नै भेटिएकाले एक दुई वटा नराम्रा प्रतिक्रियाहरूले उनीहरूलाई छोएन। बरु यी सङ्कलन गरिएका कुराहरूबाट काम छिट्टै सुरु गर्न तिर लागे।
अनुसन्धान गरेपछि साँच्चै सजिलो भयो। थाल्न लागेको काममा पहिला त्यति धेरै ज्ञान थिएन भने अहिले धेरै कुराहरू पत्ता लागिसकेका थिए। उनीहरूमा नयाँ उत्साह थपिएको थियो। घरघर पुगेर प्रत्यक्ष रूपमा गरेको अनुसन्धान प्रभावकारी देखिएपछि सुरुमा ड्राइभर पनि उनीहरूले त्यसरी नै खोजे। त्यो काम पनि सफल भयो। अब अर्को काम अफिस खोल्न ठाउँ खोज्नु थियो। उही समयमा विकासको घरमा दुई कोठा खाली रहेछ। त्यही अफिस राख्ने सल्लाह भयो। यसरी अफिस खोल्न ठुलो समस्या भएन र कम्पनी सुरु गर्दा धेरै खर्च नभएकाले दुवैलाई पैसाको समस्या पनि परेन।
सुरु त गरे तर उनीहरूका बारेमा थोरैलाई मात्र थाहा थियो। ग्राहक बन्न समय लाग्ने देखियो। धर्यताका साथ काम गर्नु पर्ने थियो। अनि बिस्तारै फेसबुक पेज खोलेर मार्केटिङ सुरु गरे। फेसबुकमा ग्राहकहरूको राम्रो संलग्नता रह्यो। यति भएपछि ड्राइभरहरू सङ्कलन गर्नका लागि फेसबुकबाटै फारम भर्ने व्यवस्था पनि मिलाए। अहिले धेरै जस्तो ड्राइभरहरू फेसबुकबाटै फारम भरेर आउने गरेका छन्। फारम सँगसँगै नागरिकता, लाइसेन्स र पासपोर्ट साइजका फोटोहरू पनि चाहिन्छ। उनीहरूले कम्तीमा ४ वर्षसम्म ड्राइभिङको अनुभव भएका चालकहरूलाई मात्र छान्ने गरेका छन्। छानिएर आएका चालकहरूलाई पनि २ घण्टाको विशेष तालिम दिएर मात्र काममा पठाउने गरिन्छ। कम्पनीले चालकका लागि छुट्टै युनिफर्म राखेको छ। गाडी चलाउँदा चालकले कम्पनीको लोगो भएको सुन्तला रङ्गको सर्ट र निलो रङ्गको प्यान्ट अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्छ।
अहिले उनीहरूले काम सुरु गरेको १ वर्ष भई सकेको छ। विकास कम्पनीको अकाउन्ट हेर्छन् भने रबिन मार्केटिङ तिरको पाटो सम्हाल्दै छन्। ३० जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूले कम्पनीबाट सेवा लिइसकेका छन्। उनीहरूले देशभरि नै ड्राइभरहरू सप्लाई गर्ने गरेका छन्। ७७ वटै जिल्लाका लागि सेवा दिने भएता पनि काठमाडौँ उपत्यका भित्रबाट धेरै माग आउने गर्छ र उपत्यकाको पनि स्कुल र मन्टेश्वरीहरूमा धेरै मात्रमा सप्लाई गर्नुपर्छ भनी रबिन बताउँछन्। हाल उनको कम्पनीमा ३० देखि ३५ जनासम्म ड्राइभरहरू छन्। आवश्यकता पर्दा कम्पनीमा जुनै समयमा पनि फोन लगाउन सकिन्छ। घण्टा, हप्ता, महिना र वर्ष जति अवधिका लागि पनि ड्राइभरको माग गर्न सकिन्छ। बिचमा ड्राइभरले काम नगर्ने हुँदा वा अरू कुनै समस्या परेमा अर्को ड्राइभर तुरुन्तै पठाइन्छ।
सेवा दिएका व्यक्तिहरूसँग हरेक शुक्रवार उनीहरू प्रतिक्रिया लिन जाने गर्छन्। हालसम्म सधैँ राम्रै प्रतिक्रिया बटुलेर फर्किने गरेका छन्। यसले उनीहरूलाई थप उत्साह मिलेको छ।
भन्छन्, “नाफालाई भन्दा सेवालाई बढी ध्यान दिएका छौँ। धेरै ठुलो नाफा गरौँ भन्ने उद्देश्य हामीले राखेका छैनौँ।”
आफूले भोगेका समस्याबाट समाधानको सिर्जना गरेकोमा दुवै व्यवसायी खुसी छन्। भविष्यमा उनीहरू ड्राइभर मात्र नभएर सवारी साधन पनि सप्लाई गर्ने सोचमा छन्।
उहाँहरूलाई उद्यमी नेपालको टिम शुभकामना दिन चाहन्छ।
नोट: यो लेख उद्यमी नेपालको श:शुल्क सेवा अन्तर्गत तयार पारिएको हो। उद्यमी नेपालको श:शुल्क सेवा लिइदिनु भएकोमा ड्राइभर सर्भिस फर केयर प्रा.लि. लाई विशेष धन्यवाद।
ड्राइभर सर्भिस फर केयर प्रा.लि. सँग सम्पर्क गर्नुहोस्:
फोन: ९८०१६४४४४२/ ९८०१६४४४४३
फेसबुक: विकास थापा , रबिन श्रेष्ठ
तलको युट्युब भिडियोमा उद्यमी नेपाल र ड्राइभर सर्भिस फर केयर प्रा.लि. बीच भएको प्रतक्ष अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्:
दिदी अन्जु घिमिरे र भाइ विशाल घिमिरे...
नेपाली युवाले बनाए मोबाइलबाटै घरका सबै विद्युतीय सामान...
घरबाट हतार हतार गरेर निस्किँदा कहिलेकाहीँ बत्ती...
एकै ठाउँबाट घर निर्माणदेखि, व्यवस्थापन र मर्मतसम्मको सबै...
सम्पूर्ण सुख सुविधा सहितको आफ्नै एउटा चट्ट...